Caalin Maraykan ah oo ku markhaati furaya Mangs - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Lars Pehrson/Scanpix.
Caalin Maraykan ah oo ku markhaati furaya Mangs
La daabacay tisdag 5 juni 2012 kl 10.32
Maanta ayaa maxkamada magaalada Malmö qorshaynaysaa in ay guda gasho rasaasayntii saddexdii qof ee rasaastu ku haleeshay banaanka goobta lagu dabaasho sannadkii 2010 bishiisii jun.
Maxkamadda maanta ayaa loo yeedhi doona markhaatii Maraykan ah.
Bishii jun ee sannadkii 2010 ayaa laba nin rasaasi haleeshay goor ay ka dageen Taxi oo ay u socdeen makhaayaad ku taal goobta lagu dabaasho, halkaaso ay dad badan oo makhaayada ku jiray ay cabsi iyo argaagax u kala firdheen.
Maxkamada ayaa sidoo kale sii wadi doonta dacwadii laba nin oo rasaasi ku haleeshay goor ay dhex fadhiyeen baabuurkooda.
Maxkamada maanta ayaa ku bilaabmi doonta in loo yeedho markhaati cusub, kaaso ah takhasuuse maraykan ah laguna magacaabo Adina Schwartz.
Adina Schwartz ayaa su'aalo la waydiin doona bisha julay afarteeda.
Adina ayaa loogu yeedhay si ay u cadayso qumaca rasaastu qasharka u ka soo baxay, cadaymaha badan ee xeer ilaaliyaha ayaa salka ku haya hubka u isticmaalay Peter Mangs iyo qasharada ay bileysku gacanta ku dhigeen.
Maaliintii salaasada ahayd ayaa maxkamadu daahtay dhib ka yimid dhanka teknikada, taaso sababtay in aan codka maxkamada iyo sawirradaba aan laga maqlayn goobta ay ku suganyihiin shacabka la socda maxkamadan.
Sidaan hore maalintii jimciihii ahayd idinku soo warinay ayaa maxkamada waxaa joogay nin daaqada xabaddi uga soo gashay sannadkii 2010, balse maxkamada la hakiyey qalad ka yimid dhanka teknikada awgood oo codkii hawada ka baxay, balse waxaa goobta ku sugnaa idaacada Radio Sweden oo duubay codkii goobtaas ka baxayey taaso sababtay in maxkamada dib loo sii wadi karo maadaamo codkaasi yahay mid ay ku guulaysteen Radio Sweden in ay duubaan.
Dhagayso: Ninkii loo haystay dilalka Malmö
Baritankii dilaa Peter Mangs oo noqday kii ugu qaalisanaa abad